Misy tery ny lalan-kaleha sy ny ho avy… | NewsMada
Misy tery ny lalan-kaleha sy ny ho avy…
Tsy moramora ny hoe fanarenam-pirenena sy fampandrosoana. Sarotra ny lalana, mafy, lavitra. Ao anatin’izany ny hoe misy tery izay aleha sy ny ho avy. Nahoana? Mitaky fanapahan-kevitra, fahavononana, fahasahiana, fahatokisan-tena. Sao vilam-bava mpitari-bato: hafa ny lazain’ny vava, fa tsy araka izay tondroin’ny molotra. Aiza ho aiza amin’izany ireo mpitarika?
Mila fahamarinana ny raharaha, fanajan-tena amin’ny fanatanterahana izay lazaina, fampiharan-dalàna. Mahakizo ny lalana avokoa izany, fa tsy vita mora. Manginy fotsiny ny hoe raharaham-pirenena tsy ananan-kavana, tsy anaovana kiantranoantrano, tsy atao an-kifonofono… Amin’izany, mba tsy ho tompon-trano mihono ny vahoaka, na ho tompony mangataka atiny.
Mby izany rehetra izany? Tsy vitan’ny kabary tsy valina io, fampanantenana lava, fihetsiketsehana ivelany. Ao raha fa mitaky hatrany ny ady amin’ny kolikoly ireo mpiara-miombon’antoka. Eo koa ny fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ny fampanjakana ny fandriampahalamenana… Mahatery ny lalan-diavina izany, tsy efan’ny fitsambikimbikina-mikimpy.
Ahoana àry raha misy tery ny lalan-kaleha sy ny ho avy? Sarotra sy mafy, fa tsy mazava sy anaovana kitsapatsapa lava. Raha tsy ampitoviana izay lazain’ny vava sy izay tondroin’ny molotra toy ny an’ny mpitari-bato vilam-bava, mampanahy ny ho avy. Na ho voabahan’ny vato ny lalana, na hisy ny toron’ny vato… Fanarenam-pirenena sy fampandrosoana tokoa ve no atao?
Efa misy ny mitarika any amin’ny fahazoana vato: mpitari-bato… Any amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika amin’ny taona 2018 io? Tsy mahagaga raha mivilana mbamin’ny lalan-kaleha… misy tery: tsy fantatra be ihany. Mandeha ho azy amin’izany ny hetsika fanairana, fitsikerana, fampitandremana… Ho aiza marina? Samy manana ny lalany ny vahoaka sy ny mpitondra.
Tsy mbola mahataitra ny firongatry ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa? Efa ny vahoaka izao no… Aoka re e! Mila fehezina ny raharaha, raha mbola zaka sy hizaka fitondrana. Fotoana izao taona vaovao izao.